हालसम्मकै रेकर्ड तोड्दै हुन्डाईको सेन्ट्रोको एक महिनामै २९ हजारको बुकिङ्ग!::Hamrodamak.com
हालसम्मकै रेकर्ड तोड्दै हुन्डाईको सेन्ट्रोको एक महिनामै २९ हजारको बुकिङ्ग!
काठमाडौँ। हुन्डाईको नयाँ सेग्मेन्ट सेन्ट्रोले ब सार्वजनिक भएको २२ दिनमा नै यो मोडलको २८ हजार ८०० यूनिट बुकिङ भएको छ । कम्पनीकाअनुसार, यो सेग्मेन्टको अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।
भारतीय बजारमा अक्टोवर २३ मा सार्वजनिक हुन्डाईको सेन्ट्रो सेन्ट्रोको बुकिङ खोलेको ९ दिनमा नै १४ हजार यूनिट बुकिङ्ग गर्न सफल भएको थियो । हाल यसको मूल्य यसको यूनिट बढेर २८ हजार ८०० पुगेको छ ।
यो कारमा पेट्रोल तथा सीएनजी दुवै इञ्जिन विकल्प दिइएको छ । हुन्डाई सेन्ट्रोमा दिइएको १.१ लिटर, फोर–सिलिन्डर इञ्जिनले ६९ बीएचपी र ९९ एनएम–टर्क उत्पादन गर्छ । यसको पेट्रोल इञ्जिनमा फाइभ–स्पीड म्यानूअल र न्यू अप्सनल फाइभ–स्पीड एएमटी गिएरबक्स दिइएको छ । नयाँ सेन्ट्रोले २०.३ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिनेछ । कारमा हलोगेन हेडल्याम्प, वाइड ग्रील, फोगल्याम्प, स्टील ह्वील, हवक्याप तथा रियर साइडमा मिड–सेट टेलल्याम्प दिइएको छ ।